Wararka - Taasi waa dhalada hore ee nolosha cusub, Coca-Cola RPET dallada cadceedda “la dejiyey” Saldhigga Tareenka Waqooyiga Qingdao
Taasi waa dhalada hore ee nolosha cusub, Coca-Cola RPET dallada cadceedda “la dejiyay” Saldhigga Tareenka Waqooyiga Qingdao
Bishii Agoosto, 2020, isgoyska weyn ee lugta ee Saldhigga Tareenka Waqooyiga Qingdao, dhowr dalladood oo qaas ah ayaa la saaray, kuwaas oo lagu daabacay astaamaha leh astaamaha Qingdao sida buufinta, bad-mareenka iyo dhismaha. Kuwii ugu yaabka badnaa waxay ahaayeen ereyada "Waxaan ahaan jiray dhalo caag ah" iyo "Waan danaynaynaa" oo lagu daabacay cidhifka dalladda, taas oo soo jiidatay indhaha dadka lugaynaya.
Maxay dallad ka qabtaa dhalooyinka caagga ah? Waxaa soo baxday in dalladahaasi dhammaantood ka samaysan yihiin dhalooyin caag ah oo dib loo warshadeeyay. Dib-u-warshadaynta ka dib, dhalooyinka caagga ah ee faaruqa ah ayaa lagu farsameeyaa habab taxane ah oo ugu dambayntii lagu xiraa nooc cusub oo ah doog cagaaran oo bey'ada u habboon, oo ah maaddada dharka RPET, oo ah fikrad cusub oo ku saabsan dib-u-warshadaynta walxaha. Waxaad isticmaali kartaa illaa 17 dhalooyin caag ah oo duug ah si aad u sameysid dallad qoraxeed oo aad dib u cusbooneysiiso.
Waxaa la fahansan yahay in dalladaha cadceedda ka soo jeeda fikradda ah horumarka waara ee Coca Cola - “Qashin adduunka laguma arko”, waxaa loogu talagalay inay u sheegaan meertada nolosha buuxda ee PET, si dad badani u fahmaan astaamaha khayraadka PET caag ah iyo muhiimadda dib-u-warshadaynta.
Sanadihii la soo dhaafay, CofCO Coca-Cola (Shandong) Co., Ltd. waxaa ka go'an inay gacan ka geysato abuurista bilicda magaalada, ilbaxnimada iyo ilaalinta deegaanka, iyadoo diiradda la saarayo hal-abuurnimada iyo daryeelka bulshada, si wadajir ah loo dhiso dhismaha ilbaxnimada magaalooyinka ee Qingdao. .
Dharka ka samaysan fiber-ka dib loo warshadeeyay dib-u-warshadaynta "Coke bottle" waxaa dib loogu rogi karaa Fiber fiber-ka 100% maaddada dib loo rogay, taas oo si wax ku ool ah u yareyn karta qashinka. Waqtigan xaadirka ah, isticmaalka dhalooyinka cabitaanka caaga ah ee PET ee Shiinaha aad ayuu u sarreeyaa. Dib-u-warshadaynta dhalooyinka cabitaanka ee PET kaliya ma yareyn karto wasakheynta deegaanka, laakiin sidoo kale qashinka waxay u beddeleysaa khasnad.
Wixii PVC ah oo ka kooban koloriin (waa isha ugu weyn ee dioxin iyo dioxin waxaa lagu cadeeyaa kansarka) waxayna kujirtaa wasakheynta deegaanka ee biraha culus, bacrimiyeyaasha, iwm, iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyaddii ugu dambeysay, soosaarka Taiwan kuma jiraan PVC, waxyaabaha birta culus ka kooban oo ku dhowaad ma la cabbiro, oo loogu talagalay in lagu beddelo alaabada PVC, ay noqdaan jiil cusub oo alaab-qeybiye u ah ilaalinta deegaanka